आमा र बाबु बाट आमा वा बाबु सम्म
नागरिकताको सवालमा आमा र बाबु बाट शुरू गर्यो, सबै लाई झस्कायो, अनि आमा वा बाबु सम्म पुग्यो। बाहुनहरु। नागरिकता बारे जुन नया मंचन हुँदैछ त्यो के हो? त्यो पनि बाहुन हरुले ख्याल ख्याल गरेको हो? १६ बुँदे मा छैन यो। यो अर्कै फेरि कुन दस्तावेज हो? १६ बुँदे मा थ्रेसहोल्ड पनि छैन। त्यसमा पनि विवाद छ। त्यसको डिटेल कहाँ छ? मैले देख्या छैन।
मधेस अलग देश मेरो लागि एक मात्र अस्त्र होइन कि nuclear ऑप्शन हो: अंतिम अस्त्र। But it isavery real option. मलाई त्यो मात्र नेपाल स्वीकार्य छ जहाँ मधेसी लाई समानता छ: equality. And that is non negotiable.
हामी मधेसी बाहुन हरुको देशमा बसेका मानिस होइनौं। सार्वभौमसत्ता जनता मा हुने कुरा नबुझ्नेले ट्यूशन पढ्ने गएर।
Amresh Singh: Note Of Dissent
१५ दिन लाठी जुलुस निकालो और अपना देश बनाओ
र यो नागरिकता को मुद्दामा ख्याल ख्याल हो भने १६ बुँदे पनि ख्याल ख्याल हो? किनभने त्यहाँ परिमार्जन गर्नु पर्ने धेरै छ।
ethnic prejudice federalism Madhesh madhesi Nepal right to self determination swaraj Terai